Iindlela ezi-4 zokuFunda koMatshini ziKhulisa ukuThengiswa kweendaba zeNtlalo | Martech Zone
Ngabantu abaninzi ababandakanyekayo kunxibelelwano lwe-intanethi mihla le, amajelo eendaba ezentlalo abe yinxalenye ebalulekileyo yezicwangciso zentengiso zamashishini azo zonke iintlobo.
Kwakukho i-4.388 yezigidigidi zabasebenzisi be-intanethi kwihlabathi liphela ngo-2019, kwaye iipesenti ezingama-79 kubo babengabasebenzisi bezentlalo.
Ingxelo yeHlabathi yeNgxelo yeDijithali
Xa isetyenziswa ngobuchule, intengiso yemidiya yoluntu inokuba negalelo kwingeniso yenkampani, ukubandakanyeka kunye nokwazisa, kodwa ukubakho kumajelo eendaba ezentlalo akuthethi ukusebenzisa zonke izinto zosasazo zasekuhlaleni ezigcinelwe amashishini. Eyona nto ibaluleke kakhulu yindlela oyisebenzisa ngayo iitshaneli zentlalo, kwaye kulapho amathuba anokuvezwa ngokufunda ngomatshini.
Siza kuqhuma idatha, kodwa le datha ayinamsebenzi ngaphandle kokuba ihlalutyiwe. Ukufunda ngomatshini kwenza ukuba kube nakho ukuhlalutya iiseti zedatha ezingenamda kunye nokufumana iipateni ezifihliweyo emva kwabo. Ngokuqhelekileyo kufakwa ngoncedo lwe abacebisi bokufunda ngomatshini, obu buchwephesha buphucula indlela idatha eguqulwa ngayo ibe lulwazi kwaye yenza ukuba amashishini enze uqikelelo oluchanekileyo kunye nezigqibo ezisekwe kwinyani.
Ezi ayizizo zonke izibonelelo, ke makhe sijonge ezinye iinkalo zeshishini ezinokuphuculwa ngokufunda ngomatshini.
1. Ukubeka iliso kwiBranti / ukumamela ekuhlaleni
Ukuphumelela kweshishini namhlanje kumiselwe zizinto ezininzi, kwaye mhlawumbi enye yezona zinto zinempembelelo kubo kukuduma kwi-Intanethi. Ngoku ka UPhononongo lokuHlolwa kwabaThengi baseKhaya, Iipesenti ezingama-82 zabathengi bajonga uphononongo olwenziwe kwi-Intanethi lwamashishini, kunye novavanyo ngalunye lwe-10 kwi-avareji ngaphambi kokuthemba ishishini. Oku kungqina ukuba intengiso elungileyo ibalulekile kwiimveliso, yiyo loo nto abaphathi kufuneka bafumane indlela yokulawula ishishini ngokufanelekileyo.
Ukubeka iliso kwiBrand sisisombululo esifanelekileyo, esikukukhangela nakuphi na ukukhankanywa kwegama kuyo yonke imithombo ekhoyo, kubandakanya imithombo yeendaba zentlalo, iiforamu, iibhlog, uphononongo kwi-Intanethi kunye namanqaku. Ukuvumela amashishini ukuba abone iingxaki ngaphambi kokuba zikhule zibe ziingxaki kwaye zisabele ngexesha, ukubeka iliso kwimpawu kunika abaphathi ukuqonda okupheleleyo kwabo kujoliswe kubo, kwaye ke oko kunegalelo ekuthathweni kwezigqibo okungcono.
UkuFunda koMatshini kunceda njani ukuJonga uBrand / ukumamela ekuhlaleni
Njengesiseko sohlalutyo lokuqikelela, ukufunda ngomatshini kunegalelo ekuqondeni ngokupheleleyo kwabo bathatha izigqibo kuzo zonke iinkqubo eziqhubekayo kwiinkampani zabo, ukuze izigqibo zabo ziqhutywe ngakumbi kukuqhutywa kwedatha kwaye kujolise kubathengi, kwaye ke oko kube nokusebenza ngakumbi.
Ngoku cinga ngazo zonke izinto ezikhankanyiweyo kwishishini lakho ezikhoyo kwi-Intanethi-zingaphi eziza kubakho? Amakhulu? Amawaka? Ukuqokelela kunye nokuzihlalutya ngesandla akunakuba ngumceli mngeni kulawulo, ngelixa ukufunda ngomatshini kukhawulezisa inkqubo kwaye kubonelela ngophawu oluneenkcukacha kakhulu lophawu.
Ngaphandle kokuba abathengi abangonwabanga banxibelelane nawe ngqo ngefowuni okanye nge-imeyile, eyona ndlela ikhawulezayo yokufumana kunye nokubanceda kukuhlalutya iimvakalelo-iseti yoomatshini bokufunda ubuchule obuvavanya uluvo loluntu malunga neshishini lakho. Ngokukodwa, ukukhankanywa kwegama kuhluzwa imeko engalunganga okanye elungileyo ukuze ishishini lakho likhawuleze lisabele kumatyala anokuchaphazela uphawu lwakho. Ukuhambisa ukufundwa koomatshini kuvumela amashishini ukuba alandele izimvo zabathengi ngaphandle kolwimi ababhalelwe kulo, olonyusa indawo yokujonga.
2. Uphando ekujoliswe kulo kubaphulaphuli
Iprofayile ekwi-Intanethi inokuxela izinto ezininzi, ezinje ngobudala bomniniyo, isini, indawo yokuhlala, umsebenzi wokuzonwabisa, ingeniso, imikhwa yokuthenga, kunye nokunye, okwenza imithombo yeendaba zentlalo ibe ngumthombo ongapheliyo wamashishini wokuqokelela idatha malunga nabathengi babo kunye nabantu abo bangathanda ukubandakanyeka. Ke, abaphathi bezentengiso bafumana ithuba lokufunda ngabaphulaphuli babo, kubandakanya nendlela imveliso yenkampani okanye iinkonzo ezisetyenziswa ngayo. Oku kuququzelela inkqubo yokufumana iimpazamo kwimveliso kwaye kutyhila iindlela apho imveliso inokuthi iguquke.
Oku kungasetyenziswa kubudlelwane be-B2B: ngokusekwe kwiikhrayitheriya ezinje ngobungakanani benkampani, ingeniso yonyaka, kunye nenani labasebenzi, abathengi be-B2B bahlulwe baba ngamaqela, ukuze umthengisi angadingi ukufumana ubungakanani obulingene konke Isisombululo kodwa ujolise kumacandelo ahlukeneyo usebenzisa indlela efanelekileyo kakhulu kwiqela elithile.
UkuFunda koMatshini kunceda njani uPhando olujolise kubaphulaphuli
Iingcali zentengiso zinedatha eninzi ukujongana nayo-eqokelelwe kwimithombo eliqela, inokubonakala ngathi ayinakuphela xa kufikwa kuphengululo lwabathengi kunye nohlalutyo lwabaphulaphuli. Ngokuthumela ukufundwa koomatshini, iinkampani ziyayiphelisa inkqubo yokuhlalutya amajelo awahlukeneyo kunye nokukhupha ulwazi oluxabisekileyo kuwo. Ngale ndlela, abasebenzi bakho banokusebenzisa idatha esele yenziwe ukuba baxhomekeke xa behlula abathengi.
Kwakhona, ii-algorithms zokufunda ngomatshini zinokubonisa iipateni zokuziphatha zeli okanye elo qela labathengi, linike iinkampani ithuba lokwenza uqikelelo oluchanekileyo ngakumbi kwaye zisebenzise oko kuluncedo lwabo lobuchule.
3. Ukwamkelwa komfanekiso nevidiyo
Kwi-2020, ukuqondwa kwemifanekiso kunye nevidiyo kuza njengetekhnoloji evelayo eyimfuneko kuzo zonke iinkampani ezifuna ukhuphiswano. Imithombo yeendaba kwezentlalo, ngakumbi iinethiwekhi ezinjenge-Facebook kunye ne-Instagram, zibonelela ngenani elingenamda lezithombe kunye neevidiyo ezithunyelwa ngabathengi bakho mihla le, ukuba ayinguye wonke umzuzu.
Okokuqala, ukwamkelwa komfanekiso kuvumela iinkampani ukuba zichonge iimveliso ezizithandayo zabasebenzisi. Ngolu lwazi luqwalaselweyo, uya kuba nakho ukujolisa ngokufanelekileyo kwimikhankaso yakho yokuthengisa ukuze uthengise kwaye uthengise ngokuthengisa ukuba umntu sele esebenzisa imveliso yakho, kwaye ubakhuthaze ukuba bazame ngexabiso elinomtsalane ngakumbi ukuba basebenzisa imveliso yomntu okhuphisana naye . Kwakhona, itekhnoloji inegalelo ekuqondeni abaphulaphuli ojolise kubo, njengoko imifanekiso ngamanye amaxesha inokuxela okuninzi malunga nengeniso yomntu, indawo kunye nezinto anomdla kuzo kuneprofayili engazaliswanga kakuhle.
Enye indlela amashishini anokuzuza ngayo kumfanekiso kunye nokuqondwa kwevidiyo kukufumana iindlela ezintsha ezinokusetyenziswa kwimveliso yazo. I-intanethi namhlanje igcwele iifoto kunye nevidiyo zabantu abaqhuba iimvavanyo kwaye benza izinto ezingaqhelekanga besebenzisa ezona mveliso ziqhelekileyo ngendlela entsha ngokupheleleyo-kutheni ungazisebenzisi?
UkuFunda koMatshini kunceda njani ukuqondwa kweMifanekiso kunye neVidiyo
Ukufunda ngomatshini yinxalenye ebalulekileyo yomfanekiso kunye nokuqondwa kwevidiyo, esekwe kuqeqesho oluqhubekayo olunokwenzeka kuphela ngokusebenzisa ii-algorithms ezifanelekileyo kunye nokwenza inkqubo ikhumbule iipateni.
Okwangoku, imifanekiso kunye nevidiyo ezibonakala ziluncedo kuqala kufuneka zifunyanwe phakathi kolwazi oluninzi olufumanekayo kumajelo eendaba ezentlalo, kwaye kulapho ukufundwa komatshini kuququzelela ukuthunywa ekunokwenzeka kungenakwenzeka ukuba kwenziwe ngesandla. Ukuqiniswa ngobuchwephesha bokufunda obuphambili kumatshini, ukuqondwa kwemifanekiso kunokukhuthaza amashishini ukuya kwinqanaba elitsha lokujolisa, ukubonelela ngolwazi olwahlukileyo malunga nabathengi kunye nendlela abasebenzisa ngayo iimveliso.
Ukujoliswa kwabaThengi kunye neNkxaso ngeVenkbots
Ngakumbi nangakumbi namhlanje abantu bayayamkela imiyalezo njengeyona ndlela ilula yokunxibelelana, enika iinkampani amathuba amatsha okubandakanya abathengi. Ngokunyuka kweencoko ngokubanzi kunye nokuncokola iiapps ezinje ngeWhatsApp kunye neFacebook Messenger, iingxoxo ziba sisixhobo esisebenzayo sokuthengisa-baqhubekeka ulwazi ngazo zonke iintlobo kwaye banokusebenzela ukuphendula kwizicelo ezahlukeneyo: ukusuka kwimibuzo esemgangathweni ukuya kwimisebenzi ebandakanya inani lezinto eziguqukayo.
Ngokungafaniyo namakhonkco aqhelekileyo okuhamba kunye namaphepha ewebhu, iingxoxo zibonelela abasebenzisi ngesakhono sokukhangela kunye nokuphonononga besebenzisa inethiwekhi yoluntu okanye usetyenziso lomyalezo abalukhethayo. Kwaye ngelixa intengiso yedijithali yemveli isebenza ngemifanekiso, isicatshulwa, kunye nevidiyo, i-bots yenza kube lula kwiimpawu ukunxibelelana nomthengi ngamnye ngokuthe ngqo kunye nokwakha incoko yababantu.
Iincoko ezikhuthaziweyo ngokuFunda ngomatshini
Uninzi lweengxoxo ziqhuba kumatshini wokufunda ubuchule. Ukuba i-chatbot yinto ejolise kuyo, nangona kunjalo, inokusebenzisa inkqubo ye-neuro-yolwimi kunye nemithetho yokuhambisa iimpendulo ezakhiweyo kwezona zicelo ngokubanzi ngaphandle kokufuna ukuba umatshini afunde ukuxhasa amandla asisiseko.
Kwangelo xesha, kukho iingxoxo zencoko eziqhutywa kwangaphambili zedatha-esebenza njengabancedisi abakrelekrele, bafunda ekuhambeni ukunika iimpendulo ezifanelekileyo kunye neengcebiso, kwaye abanye banokulinganisa iimvakalelo. Iingxoxo eziqhutywa yidatha zixhaswa kukufunda komatshini, njengoko zihlala ziqeqeshwa, ziguquka kwaye zihlalutya ukhetho lwabasebenzisi. Ngokudibeneyo, ezi nyani zenza unxibelelwano lwabasebenzisi kunye neshishini libe lelomntu ngakumbi: ukubuza imibuzo, ukubonelela ngolwazi olufanelekileyo, ukuvelana, kunye nokuqhula, iincoko zengxoxo zibhenela kwinto engenakufikeleleka kwiintengiso zesiko.
Ngeengxoxo zengqondo ezikrelekrele, amashishini anokunceda inani elingenamda labathengi naphina kwaye naphi na apho bakhoyo. Ukugcina imali kunye nexesha kunye nokuphucula amava abathengi, iingxoxo ziba yenye yezona ndawo ziluncedo kakhulu ze-AI zokutyala imali kumashishini aphakathi kunye namashishini.
tags: aikukubhadla okungeyonyanib2bIindlela zokuziphathaukubeka iliso kwi-branduphawu lophawuchatbot yokufunda kumatshiniiingxoxoUkujolisa kumthengiubuchwepheshe obuvelayoimeko yelizwe yengxelo yedijithaliukuqonda umfanekisoukuqondwa komfanekiso wokufunda komatshiniabancedisi abakrelekreleyokufunda umatshiniUkujonga iliso lophawu lomatshiniukufundwa komatshini ukuphulaphula ekuhlaleniukufunda ngomatshini kwimidiya yoluntuUhlalutyo oluqikelelweyoinkxaso kubathengi kwezentlaloSocial Media MarketingUkujolisa kwimidiya yoluntuekujoliswe kubo kuphandoukwamkelwa kwevidiyoukufundwa komatshini wokuqonda ividiyo